Dị ka aha ya na-atụ aro, SyncMate a na-eji na-gị data na mmekọrịta n'etiti Mac na Android / iOS ngwaọrụ. The data ọ pụrụ mmekọrịta na-agụnye kọntaktị, SMS, kalenda, oku, nchekwa, safari ibe edokọbara, iPhoto na iTunes. E wezụga, i ike efego ngwaọrụ gị dị ka mpụga disk mbanye, nke na-eme ka ọ dị mfe na-adaba adaba n'ihi na ị na jikwaa ọdịnaya na Mac. Otú ọ dị, e nwere na ka ọtụtụ nsogbu drawbacks nke i nwere ike izute mgbe eji SyncMate.
Kasị nke ọdịnaya ọ pụrụ mmekọrịta bụghị free. Iji jiri bupu version, ị ga-akwụ maka ya.
Ọ bụ naanị dakọtara na Mac OS X 10,8 na mgbe e mesịrị.
Njehie apụta mgbe syncing Outlook na Google kalenda na kọntaktị.
Windows: 26.89M $24.95 / 1Year
Android: dịgasị na Android WiFi ọrụ: $4.99 Site na eriri USB, WiFi
Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondersgare TunesGo (Win) bụ iTunes maka Android software, ka ị na-eji iTunes jikwaa gị Android ma ọ bụ mbadamba si Mac conveniently. Na ya aka, ị nwere ike mmekọrịta music, listi ọkpụkpọ, fim na ihe n'etiti iTunes na Android, na ikpuru na dobe music, video, listi ọkpụkpọ, foto na akwụkwọ faịlụ site na Mac ka Android.
Selectively mmekọrịta iTunes media faịlụ ka Android.
Dọrọ na dobe music, fim, foto na dọkụmentị site na kọmputa na-Android
Hichaa oyiri iTunes songs na idozi music ID 3 Ama.
Ofụri Esịt dakọtara na Android 2.1 na elu.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na Samsung, HTC, Sony, LG, Huawei, Motorola, ZTE, Google na ndị ọzọ.
Mkpa iji kwụọ ụgwọ.
Apụghị mmekọrịta kọntaktị, SMS, ibe edokọbara na ndị ọzọ na faịlụ.
Adịghị akwado WiFi.
iSyncr a pụtara ìhè ngwá ọrụ ka mmekọrịta iTunes listi ọkpụkpọ iji Android ekwentị na mbadamba seamlessly. Ị pụrụ ime ka ọ na iji eriri USB ma ọ bụ n'elu WiFi. E nwere desktọọpụ version na Android version, ị nwere ike họrọ gị chọrọ version na nwere agbalị.
Mmekọrịta dum iTunes listi ọkpụkpọ iji Android ngwaọrụ.
Ike-eji mgbe Samsung Kies arụnyere.
Enweghị ka mmekọrịta họrọ iTunes media faịlụ ka Android ngwaọrụ.
doubleTwist bụ a fechaa music ọkpụkpọ maka Android ekwentị na mbadamba. Ọ na-tumadi ji ka mmekọrịta ma jikwaa iTunes music, foto na vidiyo na gị Android ekwentị na mbadamba. I nwekwara ike ịgbakwunye music, foto na vidiyo site na PC gị ma ọ bụ Mac na ya, n'ihi ya, ị nwere ike igwu ha na ọ laa. Ọzọkwa, ọ na-enye gị na music ụlọ ahịa, Android ahịa na pọdkastị ịchọ ka ị chọta gị chọrọ mgbasa ozi faịlụ.
Nwere 3 nsụgharị maka Mac, PC na Android.
Mfe mmekọrịta iTunes media faịlụ ka Android.
Tinye media faịlụ site na kọmputa na-ya maka na-akpọ.
Adịghị akwado ngwaọrụ-agba ọsọ Android 4.3 (site na eriri USB).
3 Ụzọ Jikọọ Android ka Mac
Top 4 Alternatives ka doubleTwist
2 Ụzọ Detuo Music si Mac ka Android
Nyefee ihe niile si iTunes ka Android
3 Ụzọ ka mmekọrịta iTunes Music ka Samsung
2 Ụzọ Nyefee Music si iTunes ka HTC
Top 3 Alternatives ka iSyncr maka Mac / PC
> Resource> Alternatives> Top 3 SyncMate Alternatives nyefee iTunes ka Android Mfe